China Yoga Mpankafy Yoga Mampihatra Yoga Ao Bangkok, mpanamboatra sy mpamatsy Thailand | Tspringwater
Ireo mpankafy yoga dia manao fanazaran-tena yoga any Bangkok, Thailand
Thailand dia toerana iray tsara indrindra eto an-tany manao yoga.
Maninona ianao no tokony mampihatra yoga any Thailand
Mpampianatra yoga stellar isan-karazany no mitety an'i Thailand amin'ny fomba mahagaga matetika. Mpampianatra marobe manerantany aza no nametraka an'i Thailand ho fonenany! Izany dia manome antoka fa hisy atrikasa yoga sy fialan-tsasatra be dia be hisafidianana isaky ny manomana ny dianao ianao.
Inona koa, ireo mpampianatra ireo dia tsy azo ihodivirana fa hamorona fiarahamonina yoga be olona. Ho tonga ao an-trano ianao mandritra ny fitsidihanao voalohany ny studio yoga any Thailand. Tsy fahita matetika ny fiaraha-mianatra miara-misakafo rehefa vita ny fanazaran-tena, ary ny fihetsika mandray sabai sabai sabai any Thailandy dia mihatra amin'ny yogis ao aminy.
Ireto ny 3 amin'ireo tanànan'ny yoga yoga tsara indrindra ary aiza no tokony hampiharana azy:
Tena majika i Thailandy, ary itoeran'ny toerana mafana yoga maromaro manerana ny firenena. Ireto misy vitsivitsy fotsiny amin'ireo toerana mahasarika yoga any Thailandy!
Ny Busy Bangkok angamba tsy ny toerana voalohany noeritreretinao momba ny fahazoana ny matro yoga anao, fa ny hadalany no antony mety indrindra hifandraisana amin'ny fanaonao. Na dia tsy dia manolotra toerana yoga mangina hitanao any an-kafa aza ny renivohitry ny firenena, dia mirehareha eran'ny studio studio tena tsara ny tanàna.
Ao Bangkok, masiaka ireo mpampianatra ary voatokana ny studio - mijanona mandritra ny kilasy iray ao amin'ny Yoga E Element izay heverina ho “studio yoga tsara indrindra any Bangkok” na Absolute Yoga hitarika anao any amin'ny Big Mango alohan'ny hiainganao mankany amin'ny fialanao any ivelany. Na, raha mitady fanao nentim-paharazana kokoa ianao dia mitadiava mikoriana Iyengar ao amin'ny Empower Yoga.
Ny rano turquoise mangarahara, ny felatanana ary ny harambato mahatalanjona - mendrika ny lazan'izy ireo ny nosy Thai ary azo antoka fa toerana tsara hanaovana yoga. Mihisatra ny fotoana any amin'ireo nosy, manodidina anao ny natiora, ary manampy anao hamaha sy hahatsapa ho tony ny hafanana mafana.
Afaka mahita studio yoga sy vondrom-pahasalamana kely ianao any amin'ny ankamaroan'ny nosy fitsidihana toy ny Koh Tao, Koh Lanta, ary Koh Samui, fa ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra hitsidihana manokana ny yoga dia Koh Phangan.
Miaraka amin'ny seho yoga mavitrika, Koh Phangan dia trano ivon-toerana malaza eran'izao tontolo izao, ao anatin'izany ny foiben'ny Agama Yoga sy The Sanctuary, toeram-pivarotana manaitra iray izay manome fitsaboana detox sy spa ihany koa. Raha liana amin'ny famitana ny fiofanana ho mpampianatra mpampianatra yoga any atsimon'i Thailand ianao, zahao ny Jivani Yoga.
Farany nefa azo antoka fa tsy ny kely indrindra dia ny "Rose of the North" - Chiang Mai. Miaraka amin'ny mponina 200,000 eo ho eo dia i Chiang Mai no tanàna avaratry Thailand. Ny tendrombohitra be dia be, ny riandrano be dia be ary ny vibe tony dia nangalatra fo maro.
Heveriko fa i Chiang Mai, miaraka amin'ny faritra avaratra, no toerana tsara indrindra hifandraisana amin'ny natiora, ny fanazaran-tenanao yoga ary ny tenanao. Misy zavatra kely ho an'ny olon-drehetra eto - sakafo tsy mampino, toerana kanto, fiainana andavan'andro mahafinaritra, ary toerana fijerena valanoranom-bava - ary fiaraha-monina ara-pahasalamana sy fahasalamana iraisam-pirenena miroborobo.
Manatreha kilasy rehetra ao amin'ny iray amin'ireo studio akaikin'ny Old City, toa an'i Namo Chiang Mai na Wild Rose Yoga, ary hahatsapa avy hatrany ianao fa nofihinin'ireo mpampianatra yoga mafana izay miantso an'io toerana manokana io ho trano. Ny fomba fiaina milamina sy ny fanamafisana ny fiainana voajanahary dia mahatonga ny avaratra ho toerana mety hifantohana amin'ny fanazaran-tenanao.